Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda iyo Weerar dhabaggal ah oo lala beegsaday ciidamada AMISOM [Warbixin].
Tuesday May 28, 2019 - 22:02:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda lagula beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Qarax maanta kolonyo katirsan ciidamada dowladda lagula beegsaday deegaanka Kiiloow Mitir 13 waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 askari oo katirsan ciidamada Melleteriga sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dhinaca kale ugu yaraan 2 askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qarax ka dhacay gudaha xerada Jeneraal Goordan ee degmada Hodon, ilo wareedyo ayaa sheegaya in jugta qarax xooggan laga maqlay dhismaha xerada.
Warar kale oo laga helay dhanka duleedka magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay maanta gelinkii dambe ka dhaceen deegaanka Baarka oo qiyaastii 45 KM ujira Kismaayo.
Xoogag aad u hubeysan oo katirsna Al Shabaab ayaa weerar fool ka fool ah ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka Axmed Madoobe balse lama oga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii maanta.
Weerarada Al Shabaab ay maanta ka fulisay gobollada dhaca Koonfurta Soomaaliya ayaa ahaa kuwa ballaaran, weeraro dhabbagal ah ayaa lasoo sheegayaa in maanta ay ka dhaceen deegaanka Lambar60 ee Sh/Hoose.
Kolonyo gaadiid ah oo sahay usidday ciidamada AMISOM ee ku sugan Shalaambood iyo Buula Mareer kana yimid dhanka Muqdisho ayaa lakulmay weeraro aad u xooggan, dad ku sugan Sh/Hoose ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiic iyo rasaas lays dhaafsanayay
Sidoo kale sarkaal katirsan ciidamada dowladda ayaa saaka qarax lagula beegsaday degmada Baraawe ee Sh/Hoose, qaraxa ayaa dhaawac gaarsiiyay ciidamo ilaala u ahaa sarkaalka labeegsaday.
Dhammaan weeraradan waxaa mas'uuliyadooda sheegatay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaal kula jirta ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka